Ndagwurugwu Rhine n'etiti Mainz na Koblenz | Akụkọ Njem
Ke n'oge mgbụsị akwụkwọ nke Rhine njem enye na-atọ ụtọ Okirikiri ala dị iche iche site na afọ ndị ọzọ nke afọ: Riesling obodo nta, ụlọ na ubi vaịn, si Koblenz ke Mainz, anyị na-achọpụta ọdịnala kachasị mma ma maa mma nke ọdịda anyanwụ Alemania.
The vine perch na mkpọda na-egosi na mmiri nke otu n'ime ihe ndị kasị mkpa osimiri na Europe. Rhine, nke dị jụụ ma dị ebube, na-aga n'akụkụ nke kachasị mma, na-ezute oke ọhịa, obodo ndị ọdịnala, nnukwu ụlọ ochie na ebe a na-a winụ mmanya ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ mmanya ọcha ndị a ma ama na mpaghara ahụ.
Anyị nwere ike ịhọrọ njem ụgbọ mmiri ma ọ bụ soro ụzọ mmiri ahụ site n'okporo ụzọ, na-amapụ site n'otu ụlọ akụ gaa na nke ọzọ na akara akara dị iche iche, ebe ụgbọ mmiri na-aga n'ihu site n'otu ụzọ gaa na nke ọzọ. Koblenz, na njikọta nke Rhine na Moselle, bụ obodo mara mma, nke nwere ọmarịcha akụkọ ihe mere eme nke nwere okporo ámá ndị dị warara na ọnụnọ na-akpaghasị nke ebe ewusiri ike Ehrenbreitstein.
Inggbadata n’osimiri anyị bịara Boppard, bụ obodo ndị njem na-eme njem nleta nke ochie, nke ama ama maka nri dị ụtọ nke azụ na azụ ndị ọzọ; obere obodo ewusiri ike nke braubbach; Slọ Marksburg, Sankt-Goar, Oberwesel… Ha niile ebe bara uru ịkwụsị na ịgagharị.
Special aha kwesịrị Lọ Rheinfels, n'agbanyeghị na ọ bụ mkpọmkpọ ebe, n'ihi na ọ na-echekwa amara ya niile ma na-enye ihe doro anya na echiche kachasị mma nke ndagwurugwu Rhine. Pfalz, dị na obere agwaetiti na osimiri ahụ ma jiri ụgbọ mmiri nweta ya.
Ikpeazụ ogbo bụ Mainz, ndị Obodo Gutenberg, a labyrinth nke oge ochie n'okporo ámá na converge na ya nnukwu katidral. Ụgbọ ala, ụgbọ mmiri, ma ọ bụ mma ma, site igwe kwụ otu ebe, a gbatia nke Rhine Valley bụ n'ezie otu n'ime ndị kasị mma ije na Germany.
Ozi ndị ọzọ - Idlọ Heidelberg
Ihe onyonyo: Ogbogu Okonji
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Alemania » Ndagwurugwu Rhine dị n'etiti Mainz na Koblenz
Ọbụghị naanị na ndagwurugwu Rhine mara mma. Nakwa nke Moselle. Osimiri abụọ ahụ dị
ha na-agafe na Koblenz, n'ihi ya obodo a dabara adaba ịnọ ụbọchị atọ
marakwa osimiri abuo. Na Moselle, ụlọ mara mma. Burg Eltz. Na obodo abụọ
deluxe. Cochem na Bernkastel Kues.
Ogige Ntụrụndụ Dị Mkpa na Central America
Njem ịchọpụta Montreal na Canada